K: First LOVE
.....My first LOVE and first printed one.....
It was 17 years ago......
.....This book is still with me and this LOVE is still in mine....
အဲ့ဒါလေး အားတဲ့အခါ PDF လုပ်ဦးမယ်။
မကြီး မလုပ်နဲ့သိလား။ ညီမလုပ်ချင်လို့။
ှSo this is love... :)
မမကို အားကျလိုက်တာ။ မယ်ကတော့ ပထမဆုံးပုံနှိပ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်လေးငါးအုပ် တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး ...